Ahoana ny fomba fiaran-dalamby avy any Eropa mankany Chine?
Home » Lahatsoratra farany farany » Fitaterana » Ahoana ny fomba fiaran-dalamby avy any Eropa mankany Chine?
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovao • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fandehanana lamasinina avy any Eropa mankany Shina dia lasa zava-misy voafetra miaraka Lalam-by China Express. Mampifandray ny tanànan'i Liege any Belzika any amin'ny faritra miteny frantsay any Belzika miaraka amin'i Yiwu, tanàna misy olona 1.2 tapitrisa ao amin'ny faritanin'i Zhejiang afovoany ao Shina. Ny tanànan'i Yiwu dia malaza amin'ny fivarotana entam-barotra kely sy ny tsena mavitrika ary ho toeram-pizahan-tany isam-paritra.
Mampalahelo fa ity serivisy fiaran-dalamby vaovao ity dia mbola tsy mandray soa amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Belzika sy Sina, satria ny fitaterana entana ihany no ampiasaina ankehitriny. Hatramin'ny serivisy fiaran-dalamby sinoa-eropeana voalohany natomboka tao Yiwu tamin'ny novambra 2014, dia efa ho 900 ny dian'ireo fiarandalamby entana ary nitondra kaontenera maherin'ny 70,000.
Ny serivisy fiaran-dalamby vaovao mankany Belzika'Liege', natomboka androany tao amin'ny Yiwu West Railway Station any Yiwu, atsinanan'ny faritanin'i Zhejiang ao Shina.
Naterina kaontenera 82 entana mahazatra, niondrana an-tanàna atsinanan'ny tanànan'i Yiwu, ny tranon'ny tsena fivarotana entana kely manerantany, androany ary vinavinaina ho tonga ao Liege afaka 20 andro. Ny serivisy fiaran-dalamby vaovao dia kasaina hatao indroa isan-kerinandro.
Rehefa tonga any Liege, ireo entana dia azo alefa any amin'ny firenena eropeana hafa amin'ny alàlan'ny eHub, fananan'ny fitaovam-pitaovana Alibaba, Cainiao Network ao Liege, sy ireo fantsom-paritry ny fizarana isam-paritra. Ny zotra vaovao dia antenaina hampihena ny ora fandefasana avy any Yiwu mankany Eropa farafaharatsiny iray ka hatramin'ny roa andro.
Ny serivisy vaovao dia ampahany amin'ny fiaraha-miasan'ny Yiwu City sy ny Electronic World Trade Platform (eWTP) naroson'i Jack Ma, mpanorina ny behemoth e-commerce Alibaba.
Tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity dia nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny governemanta Yiwu i Alibaba hananganana ivon-toerana fanavaozana eraky ny eWTP ao an-tanàna.
Araka ny fifanarahana, ny roa tonta dia hanavao ny fomba varotra vaovao amin'ny fanafarana sy ny fanondranana, hiara-manangana hub logistics marani-tsaina ary hampivelatra karazana famatsiam-bola vaovao.
Nantsoina hoe "Supermarket manerantany", ny tanànan'i Yiwu dia manana tambajotra varotra matevina. Mpivarotra vahiny manodidina ny 15,000 avy amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 100 no mijanona ao Yiwu, ary mihoatra ny 400,000 ny vahiny tonga eto an-tanàna hanao raharaham-barotra isan-taona.
Ny haben'ny asa aman-draharaha fandefasana entana any Yiwu dia mitaky ny dimy ambin'ny folo ambin'ny folo amin'ny isan'ny firenena, raha 40 isan-jaton'ny parsela miampita sisintany entin'i Kainiao Network avy amin'ny AliExpress, tsenan'ny mpivarotra an-tserasera an-tserasera Alibaba, dia avy any Yiwu sy ny manodidina azy.
Ny serivisy vaovao dia nitondra ny làlamby fiaran-dalamby sinoa-eropeana rehetra izay niainga avy tao Yiwu ka hatramin'ny 11, mampifandray ny tanàna amin'ireo firenena sy faritra 37 manerana an'i Eurasia.